Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kwezatifikethi zempilo yedijithali zokuhamba emoyeni kuyabongozwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kwezatifikethi zempilo yedijithali zokuhamba emoyeni kuyabongozwa
Ngelixa uninzi lweenqwelomoya kunye namazwe zisebenzise izatifikethi zempilo yedijithali kunye neeapps, isantya sokwamkelwa kwezi zixhobo besicotha kwaye singalingani.
Ukubhabha ngenqwelomoya kurhwebo sele kuqalile ukunyuka okude, okucothayo kwindawo yokuhamba eyenziwe ngubhubhani we-COVID-19.
Umzi mveliso wenqwelo moya ufuna isixhobo esikhuselekileyo, esamkelwe kwilizwe jikelele esenza ukuba abahambi balayishe kwaye baphathe inqanaba labo lokugonya, iziphumo zovavanyo lwamva nje okanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-COVID-19.
Njengoko uhambo luthatha, iinqwelomoya, abasebenzi bezokhuseleko kunye nabokufika kunye neearhente zolawulo lwemida kulindeleke ukuba bajongane novavanyo olothusayo kunye namaxwebhu okugonya.
Inqwelomoya yoKhuseleko kwiNqwelomoya namhlanje icele umzi-mveliso wezobuchwephesha, abalawuli kunye nabasemagunyeni kwezempilo kwihlabathi liphela ukuba bakhawulezise ukuphuhliswa kwezatifikethi zempilo yedijithali esemgangathweni neyamkelweyo kwilizwe liphela kwaye zisasazwe ngokubanzi kwiinyanga ezili-12 ezizayo.
“Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kuqalile ukunyuka okude, okucothayo okuphuma kumjelo wokuhamba owenziwe sisifo i-COVID-19, kodwa olona hambo luqhelekileyo lwamazwe aphesheya luzele kukudideka kunye nokudana malunga namaxwebhu amkelekileyo, iimfuno zovavanyo kunye nokubekwa kwedwa. umngcipheko weziphumo ze-COVID ezingezizo okanye ubuqhetseba benqanaba lokugonya, ”utshilo uMongameli weSiseko kunye ne-CEO uGqirha Hassan Shahidi. "Ukwandisa ukhuseleko kwezempilo lwabakhweli sifuna isixhobo esikhuselekileyo, esamkelwa kwilizwe jikelele esenza ukuba abahambi bakwazi ukulayisha kunye nokuhamba kunye nenqanaba labo lokugonya, iziphumo zovavanyo zamva nje okanye imeko ye-COVID-19 yokufumana kwakhona, kwaye oko kuyakwamkelwa kwaye kwamkelwe naphi na apho baya khona," uthe.
Ngelixa uninzi lweenqwelomoya kunye namazwe sele ethunyelwe izatifikethi zempilo yedijithali kunye neeapps, isantya sokwamkelwa kwezi zixhobo sicothe kwaye asilingani. Isiseko sixhalabile kukuba njengoko uhambo luthatha, iinqwelomoya, abasebenzi bezokhuseleko kunye nokungena kunye neearhente zolawulo lwemida kusenokwenzeka ukuba bajongane nohlu olothusayo lovavanyo kunye namaxwebhu okugonya ukuba aqhubekeke.
"Ekuphela kwendlela eli shishini eliza kukwazi ukuqhubela phambili ngokukhuselekileyo nangendlela ebangela ukuzithemba kubahambi, abasebenzi beshishini lokuhamba ngenqwelomoya, abalawuli kunye nabasemagunyeni kwezempilo kukuba ngaba bonke abo bachaphazelekayo bayadibana kwaye babeke phambili uphuhliso nokwamkelwa kwezi zixhobo," utshilo uKapteni Conor Nolan, usihlalo weBhodi yaBaphathi beSiseko. "Sifuna izisombululo ezinokwenzakala, ezinokusebenzisana kwaye eziqinisekisa ukuba ulwazi olubuthathaka luhlala lukhuselekile."
Isiseko soKhuseleko lweNdiza ngumbutho ozimeleyo, ongajonganga kwenza nzuzo, umbutho wamanye amazwe obandakanyeka kuphando, imfundo kunye nonxibelelwano ukuphucula ukhuseleko ngenqwelomoya. Umsebenzi weSiseko kukudibanisa, ukuphembelela kunye nokukhokelela kukhuseleko lokuhamba ngenqwelomoya.